Degso Discord loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (62.60 MB)
Khilaafka waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay cod, qoraal iyo barnaamij sheekeysi fiidiyow ah oo lagu sameeyay iyadoo la tixgelinayo baahiyaha ciyaartoyda. Discord, barnaamijka isgaarsiinta ee ugu caansan oo ay door bidaan ciyaartoy in ka badan 100 milyan oo isticmaalayaal bille ah, 13.5 milyan oo toddobaadle ah oo firfircoon, iyo 4 bilyan oo jeer oo lagu sheekeysto server maalin kasta, ayaa loo isticmaali karaa Windows, Mac, Linux, moobaylka (Android iyo iOS) dhammaan aagagga. .
Soo Degso Khilaaf
Discord, oo ah softiweer aad ka soo dejisan karto una isticmaali karto gebi ahaanba bilaash kumbuyuutarkaaga, wuxuu kasbanayaa qaddarinta adeegsadayaasha iyadoo la siinayo astaamaha ay soo bandhigaan barnaamijyada kale ee lagu sheekeysto codka ee loo isticmaalo ciyaaraha sida Teamspeak oo bilaash ah. Discord waa xalka ugu fiican ee lagu sheekeysto codka ciyaaraha maadama ay bixiso dhamaan astaamaheeda iyadoo aan la yareynin waxqabadka ciyaarta ee nidaamkaaga.
Isticmaalayaasha khilaafku waxay abuuri karaan kanaallo kala duwan oo lagu sheekeysto. Waad ka wareegi kartaa kanaalladaan wakhti kasta. Waxa kale oo aad dejin kartaa rukhsadaha kanaallada aad furtay. Waxa ugu fiican ee ku saabsan Discord waa inaadan bixin wax kiro ah oo server ah si aad u abuurto kanaal. Kanaallada aad ku lug leedahay ama aad ka samaysatay Discord waxaa loo qaybiyaa sida wada sheekaysiga qoraalka ama kanaalada lagu sheekaysto ee codka. Sidan oo kale, muuqaal quruxsan ayaa la bixiyaa. Barnaamijka, oo leh muuqaal sheekeysi kooxeed, wuxuu u oggolaanayaa isticmaaleyaal fara badan inay wicitaanno cod ku sameeyaan isla kanaalka.
Isticmaalayaasha ku sheekaysanaya Discord waxay si fudud u wadaagi karaan sawirrada, xiriiriyeyaasha websaydhka iyo xashiishka. Thanks to taageerada GIF ee barnaamijka, animations GIF ayaa lagu ciyaari karaa daaqada wada hadalka. Kuwani animations GIF waxay ciyaaraan oo keliya marka isticmaalaha uu ku dul wareejiyo dulqabka jiirka animations-ka. Tani waxay ka hortageysaa nidaamkaaga inuu sameeyo howlo aan loo baahnayn.
Waad ku mahadsan tahay noocyada moobiilka ee Discord, waxaad barnaamijka ugu isticmaali kartaa barnaamijyo kala duwan.
Bilaabidda: Waxaad isticmaali kartaa Discord iyadoo aan loo eegin qalabka aad isticmaaleyso, PC, Mac, taleefan. Abuuritaanka xisaab Discord waa mid aad u fudud. Waxaad uga mid noqon kartaa Discord adoo galaya cinwaanka emaylkaaga iyo magacaaga.
Abuur serverkaaga Discord: Adeegahaagu waa goob martiqaad kaliya lagu wada hadlo oo waqti kula qaato bulshadaada ama asxaabtaada. Waad shakhsiyeyn kartaa server-kaaga adoo abuuraya wadiiqooyin qoraallo gaar ah oo ku saleysan mowduucyada aad jeceshahay inaad ka hadasho.
Bilow hadalka: Gali kanaalka codka. Saaxiibbadaada ku jira server-kaaga ayaa ku arki kara oo isla markiiba bilaabi kara cod ama fiidiyow.
Ku raaxayso waqtigaaga: Waxaad la wadaagi kartaa shaashaddaada isticmaaleyaasha kale. Ciyaaraha u daaro asxaabtaada, bandhigyo toos ah bulshadaada, u soo bandhig kooxda hal guji.
Abaabul xubnahaaga: Waxaad u habeyn kartaa gelitaanka xubinta adoo u xilsaaraya doorar. Waxaad u adeegsan kartaa qaabkan si aad u noqoto dhexdhexaadiye, u qaybiso abaalmarino gaar ah taageerayaasha, isla markaana aad u abuurto koox-kooxeedyo aad hal mar fariin ugu diri karto.
Is muuji: Maktabadda emoji, waxaad ku habeyn kartaa server-kaaga Discord sida aad rabto. Waad u rogi kartaa wejigaaga, sawirka xayawaankaaga ama sawirka saaxiibkaa ee loo yaqaan emoji oo loo adeegsan karo server-kaaga.
Khibrad qani ah oo leh Discord Nitro: Discord waa bilaash; Ma jiro xubin ama xaddidan farriinta. Si kastaba ha noqotee, Discord Nitro iyo Boost Server, waxaad ku cusbooneysiin kartaa emojis, xoojin kartaa wadaagista shaashadda, shakhsiyeyn kartaa server-kaaga.
La hadal daaqadaha leh warbaahinta iyo taageerada wadaagista url
Suurtagalnimada in la abuuro wadiiqooyin bilaash ah lana maareeyo rukhsadaha kanaalka
Cabirka Faylka: 62.60 MB
Horumar: Discord Inc.